5 Sekaiichi CNC hwokugaya hwakabvira - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Machining inopa OEM / ODM masevhisi kubva kune yedu chaiyo machining fekitori iri muDongguang, China. Isu tinopa mhando dzepamusoro machina ekugadzirisa zvikamu zvemaindasitiri mazhinji, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, otomatiki, mota, zvekurapa, simba nyowani uye mimwe minda. Tinogona kuita chero zvikamu zvinoenderana nezvaunoda.
Yakagadzirirwa pamhando yepamusoro yekugadzira CNC mizhinji axis kutendeuka uye yekugaya, isu tinogona kupa yakakwana yakazara-axis yekugaya uye yekushandura machining sevhisi. Isu takagamuchira dzichangoburwa CNC machine zvivakwa kumuchina uye kugadzira chaiyo zvikamu. Zvikamu zvinogona kugadzirwa mune zvakawanda zvigadzirwa: Stainless simbi, Aluminium, Brass uye imwe Alloy simbi.
K-Tek inogona kupa prototype uye contract machining masevhisi eCCC machining. Tinogona kuburitsa ine mbishi zvinhu aruminiyamu chiwanikwa, ndarira, simbi isina simbi, munyoro simbi, zinc chiwanikwa, PMMA, Teflon etc.zvatinogona zvinosanganisira imwe & yakawanda chokurukisa michina machining, CNC machine (kutendeuka, azvikuya), EDM, broaching, kukuya, kuchera , Kucheka giya, kupisa kupisa, kuisa, kubatanidza, tambo kutenderera etc.
Semugadziri weOEM, tinogona kupa Precision CNC machine zvikamu mune dzakasiyana siyana zvinhu:
• Chinyorwa: aruminiyamu chiwanikwa, ndarira, simbi isina simbi, yakapfava simbi, zinc chiwanikwa, PMMA, Teflon uye nezvimwe.
Pamusoro Pedza: ChiPolish, Anodize, Zn / Ni / Kr yakanamirwa pamifananidzo, Goridhe / sirivheri yakanamirwa pamuromo, Inactivation, Kupisa kwekupisa, Kupfeka kwePowder etc.
• Zvishandiso: 3 axis cnc Machining, 4 axis cnc Machining, 5 axis cnc Machining, Zvakajairwa michina, WEDM-LS, Mirror EDM, Yemukati / Yekunze Grinder, Laser Kucheka, 3D CMM, Kureba Gauge uye Chinyorwa Kuongorora nezvimwe.
Machining nemazvo shiviriro: 0.005-0.01mm.
Kukosha kwehukasha: pasi peRa0.2.
• Kugadzirwa kwepamberi, chishandiso chakakodzera, chigadziriso, chishandiso.
Zvikamu zvinogadzirwa zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli.
• Inokurumidza, yehunyanzvi sevhisi uye rutsigiro, yekugadzira uye yekugadzirisa mhinduro.
• Rizere huwandu hwehunyanzvi, Zvibvumirano zvenguva refu zvekupa.
• Inoshanduka nguva yebasa, Injiniya rutsigiro, ISO 9001: 2015 yakasimbiswa.
Parizvino tine vashandi mazana maviri. Chigadzirwa yedu 20% aivigirwa kuJapan, 60% aivigirwa kuna Europe uye America, tinogona kukupa yepamusoro uye yemakwikwi mutengo.
1) 5 Sekaiichi CNC machine / CNC hwokugaya hwakabvira / CNC Turning;
2) EDM Kucheka waya / WEDM-HS / WEDM-LS;